Thwebula eM Client 7.2.36908 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: eM Client
I-Wikipedia: eM Client
I-eM Client – isofthiwe ehlukahlukene yokuphatha ama-akhawunti amaningi we-imeyli. Isofthiwe isekela zonke izici eziyisisekelo ebhokisini lemeyili futhi ixhumana nezinsizakalo ezinkulu ze-imeyli ezifana ne-Gmail, Outlook, Exchange, Yahoo !, iCloud, njll. EM Client ikwazi ukuqoqa imilayezo engxoxweni ehlelekile futhi ithumele ama-imeyili usebenzisa izifanekiso. Isofthiwe isekela ukuhlola kokupela, ihumusha izinhlamvu ezitholiwe, ukusesha masinyane futhi ithumele i-imeyili ngesimiso. I-eM Client iqukethe ikhalenda eyakhelwe ukukhumbuza, isigaba sokwakha imisebenzi kanye nokuhlanganiswa kokuxhumana koxhumene nabo. Isofthiwe ithumela ama-imeyili asayinwe futhi abhaliwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-PGP noma i-S / MIME. I-eM Client ikuvumela ukuthi udale isipele sedatha futhi ungenise ulwazi kusuka kwamanye amaklayenti e-imeyili.
Ibha yamathuluzi amaningi
Ukuphuma kwe-imeyili enqwaba
Izifanekiso kanye namasignesha
Thwebula eM Client
Amazwana ku eM Client
eM Client software ehlobene
Imeyili iklayenti Popular kusukela Microsoft inkampani. Isofthiwe iqukethe iqoqo amathuluzi awusizo futhi ikuvumela ukuba basebenze ngayo akhawunti amaningi.
Isofthiwe multifunction for umsebenzi ezikhiqiza kakhulu nge e-mail. Isofthiwe has a enamandla uhlelo security nogaxekile ehlunga.
IncrediMail – isoftware yokuphathwa kwe-imeyili. Amathuba amaningi okuklama izinhlamvu nokulungiselela isoftware ayatholakala kumsebenzisi.
Isiphequluli nge iqoqo izici ewusizo yakhelwe for chatting ukhululekile nabangani kusukela zokuxhumana VKontakte, Facebook and Odnoklassniki.
Lena isofthiwe yokuxhumana yokuqhuba imihlangano ekhululekile nokubambisana okusebenzayo phakathi kwabasebenzi.
I-Easy Mail Plus – isoftware yakhelwe ukuthi ubhale izinhlamvu uzithumele nge-e-mail noma ngefeksi enekhono lokuphrinta ezimvilophini namalebula.
I-emulator enamandla ukuhlola izinhlelo zokusebenza, imidlalo nokunye okuqukethwe okusetshenziselwe uhlelo lokusebenza lwe-Android. Isofthiwe isekela ukulanda kusuka ku-Google Play namafayela we-apk kusuka kukhompyutha.
I-Babel – isichazamazwi se-elekthronikhi ngokusekelwa kwezilimi eziningi ezahlukene. Isoftware ihumusha amagama ahlukile noma imishwana futhi iqukethe database enkulu yamagama avela kwizichazamazwi ezahlukahlukene.
I-EaseUS yedatha Wokubuyisa idatha – isofthiwe yokuthola kabusha idatha yezinhlobo ezahlukahlukene. Isoftware iyakwazi ukubuyisa amafayela elahlekile noma angatholakali kumadivayisi ahlukile nakwiziphathi zedatha.